Wadada 'Nostalgic Tram' ee Bursa Cumhuriyet ayaa sii waday rakaabka inkasta oo uu baraf badani da'o. | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaGaadiidka Nostalgic ee ku shaqeeya Bari Cumhuriyet Street, ayaa sii waday in ay raacaan rakaab ah inkastoo ay baraf xoog leh ku socoto.
Gaadiidka Nostalgic ee ku shaqeeya Bari Cumhuriyet Street, ayaa sii waday in ay raacaan rakaab ah inkastoo ay baraf xoog leh ku socoto.
17 / 02 / 2012 16 Bursa, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Bursa ayaa dhaqan gashay ilaa xalay, baraf culus ayaa si xun saameyn xun ugu yeeshay nolosha bartamaha magaalada. Bartamaha magaalada oo dhumucda barafka ay gaareyso illaa 25 sentimitir, darawalada iyo muwaaddiniinta ayaa la qabtay iyaga oo aan diyaar u ahayn barafka. Wadada tuulada 88 ee kuxiran Bursa waxaa iskudayaya inay furaan kooxo katirsan Maamulka Gaarka ah. Wadada tareenka ee xamuulka qaada, oo dhex marta Cumhuriyet Street iyo Davutkadı, ayaa sii waday duulimaadyadeedii iyada oo aan loo kala go’in inkasta oo barafka uu da'o.
Barafkii barafka bilaabay xalay bürüdü qurxinta taariikhiga ah ee magaalada. Subaxnimadii, muwaadiniinta Bursa waxaa lagu qabtay iyagoo aan u diyaarsaneynin barafka. Gaar ahaan muwaadiniinta qeybaha sare ee magaalada maysan ka saari karin gawaaridooda. Darawalada aan soo iibsan waxay lahaayeen waqti adag.
Kooxaha magaalooyinka iyo degmada, oo ka wada shaqeeya isuduwidda waaxda booliska ayaa isku dayay inay furaan wadooyinka qulqulaya. Tophane, oo siisa gaadiid aamin ah oo taga Uludag, taksi iyo bas yar ayaa joogsan lahaa kuwa fasax qaata. Wadada Uludağ way xirmaysaa ilaa inta taraafikada kooxaha wadooyinka suga ay ku sugayeen bartamaha magaalada ilaa macaamiisha.
Dhanka kale, Saraakiisha saadaasha hawada waxay sheegeen in barafka uu socon doono illaa fiidkii, saacadaha kadib 18.00'den saameyntiisa ayaa waayi doonta, ayuu yiri.
88 VILLAGE ROAD XIRASHO
Dhanka kale, Waaxda Maamulka Gaarka ah ee Beeraha iyo Arimaha Reer Miyiga Ismaaciil Aksoy, 09.00 ilaa iyo maanta, tirada wadooyinka tuulada 88 xiran, ayuu yidhi. Aksoy, wadooyinka tuulada Inegol, Iznik iyo Keles ayaa sheegay in badanaa. 13 Bursa oo ah barta gaarka ah ee halganka si loo sii wado barafka codka Aksoy, “barafka oo dartiis saacadaha soo socda dartiis sababtoo ah kororka tirada wadooyinka tuulada xiran ayaa laga yaabaa inay kordhaan. 18 shaqaale baraf ah oo wata muunaddeena 4 iyo gawaarida xirmooyinka barafka ee 60
wuxuu sii wadaa inuu si joogto ah u shaqeeyo. Waxaan qiimeyneynaa ogeysiin kasta
In kasta oo barafku si xun u saameeyay badhtamaha magaalada, haddana wuu sii waday adeegyadiisii ​​taraamyada jidadka ee u dhexeeya Cumhuriyet Street iyo Davutkadı. Muwaadiniintu waxay doorbidaan inay ku socdaan barafka halkii ay ka mari lahaayeen taraamka nostalgic, barafka ku dhaca goobta taariikhiga ah oo leh muuqaalo qurux badan ayaa u muuqday.
Shilinka Gaadiidka MOBESEye oo ka dhacay magaalada Cumhuriyet ayaa ka muuqatay tan (Video)
Shaqaalaha Tram Bursa waxay sii wadayaan wadada Altiparmak ee 1
Gaadiidka barafka badan ee Istanbul ayaa wakhti adag ah (Video)
Baraf aad u culus oo ku yaal buurta Bolu ayaa saameeya gaadiidka
Goobta Boosaaso ee loo yaqaan 'Cumhuriyet Street' (Video)
Qalabka lagu xiray istaaga tareenka nostalgic ee Istiklal Street waxaa lagu salaamay dulsaar
Goobta saldhigga ee tareenka nostalgic ee wadada Istanbul
Shirkadda T1 Tramway ayaa sii wadi doonta wadada Inönü ee maanta
Tareenka Boosaaso wuxuu noqonayaa calaamadda jidka Cumhuriyet
Bandhigyada Metrobus waxaa lagu iibiyaa booska xayeysiinta.
Isgoysyada isgoysyada waxaa loo badali doonaa gabi ahaanba kor u dhaafsiisan ama albaabka gidaarka ah
Gaadiidka tareenka Mareykanka ayaa kor u kacay bishii Maarso inkastoo ay hoos u dhaceen qalabka biraha
Bursa (T1) Tram Waxqabadku wuxuu ka bilaabmayaa Stadium Street Maanta
Inkasta oo uu Jiilaalka ku yaalo Bursa, oo laga joojinayo gaadiidka